Filoha RAVALOMANANA MARC : TSY HIVADI-BELIRANO AMIN’NY VAHOAKA MIHITSY AHO – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc, nitondra firarian-tsoa ho an’ny vahoaka Malagasy noho izao taona vaovao izao. Toy izao raha fintinina izay lahateniny nataony izay :
Ny voalohan-teniko hoy izy dia misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa nomeny taom-baovao ary tombontsoa lehibe ho antsika mianakavy. »Ry vahoaka Malagasy, ry mpitolona mafana fo eto amin’ny Magro, ry mpitaky ny ara-dalàna,ry mpandala ny demokrasia, ry mpiaro ny zon’olombelona, ry ray amandreny, zoky sy zandry, ianareo mpiaramonina malagasy rehetra eto Madagasikara, isika rehetra izay monina ivelan’i Madagasikara : fisaorana lehibe no atolotra an’Andriamanitra noho izao fahatratrarantsika ny taona vaovao izao, ary misaotra azy isika fa notahiany ary nahazo fanomezam-pahasoavana ka manana tombon’andro ka ahafahantsika mino, ahafahantsika miaina, ahafahantsika manatanteraka ny asa aman’andraikitra apetraka amintsika. Enga anie ity taona 2013 ity mba ahafahantsika manatanteraka ny fitakiana nandritra izay taona maro nodivina nitakiantsika ny ara-dalàna izay. Enga anie ity taona 2013 ity dia mba ahafahantsika mandala ny demokrasia izay takian’izao rehetra izao, takian’ny firenena rehetra eran-tany mba hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Enga anie ity taona 2013 ity mba ahafahan’ireo olona rehetra miala amin’izao fahasahiranana sy fangirifiriana mahazo azy izao.Miarahaba anareo aho ary miantso ny vahoaka malagasy rehetra : Tonga ny fotoana ahafanatsika mieritreritra sy mandinika lalina ny zava-manjo sy ny fahasahiranana manjo ny vahoaka malagasy.Miantso ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka aho, mba samy hihaino ny feon’ny fieritreretany, mba hihaino ny feon’izao tontolo izao. Tokana ihany dia ny fanajana ny zo aman-kasina maha-olombelona.Nataon’Andriamanitra iaina sy afaka mandala ny fahafahana, ary nataony afaka mifampita sy mivezivezy ny olona rehetra.Noho izany hoy ny filoha Ravalomanana Marc : isika eto Madagasikara dia tokony hanaja sy hahalala ihany koa izany zo aman-kasina maha-olombelona izany. Koa Miarahaba ny isan-tokantrano aho hoy izy amin’izany zon’ny malagasy, amin’izany faharetana ny fitakiana ny ara-dalàna izany, ary miarahaba ny vahoaka malagasy amin’ny fahatsaram-po sy ny afom-pitiavan-tanindrazana eto amin’ny firenentsika. Teny tokana ihany ho izy no alefako dia teny izay milaza fa mino an’Andriamanitra ary matoky azy fa afaka mandamina ny fiainantsika izy. Minoa ianareo hoy izy fa tsy maintsy tafaverina amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Teny tsotra ihany no horesahako amin’ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia ny hoe manana finoana, manana fanantenana fa tsy maintsy ho avy ilay fotoana ahafantsika mihaona. Tsy ho ela dia ho avy i Dada. Averiko eto aminareo indray ary ampafantariko ny rehetra hoy izy fa tsy azo sandaina vola mihitsy aho. Noho izany mijery izay hamerenana amin’ny laoniny ny fiainan’ny vahoaka malagasy aho, ary mametraka ny finoako sy ny fanantenako fa ho avy ny fotoana ahafahantsika manandratra indray ny voninahitr’i Madagasikara ary miasa miaraka afahantsika manondrotra indray ny malagasy, Madagasikara malalatsika.Milaza aminareo mihaino ahy amin’izao fotoana izao hoy izy fa tsy hivadi-belirano amin’ny vahoaka malagasy mihitsy aho. Ny zava-dehibe dia tokana ihany , ny fifampitokisana, izaho mahatoky anareo ary ianareo matoky ahy fa tsy misy zavatra tsy vitantsika eto. Amain’ity taona ity dia ny fifanajana sy fifampitokisana, no fanantenana ao anatitsika.Tonga ny fotoana hitenenako izany hoy ny filoha Ravalomanana Marc. Matokia ahy ary manana fanantenana fa isika efa nanao velirano fa tsy hivadika ary hiezaka isika hanao izay hamerenana amin’ny laoniny ny fiainam-pirenentsika, ny fiainan’ny vahoaka tena sahirana ary indrindra ny hasin’i Madagasikara eo anivon’izao tontolo izao . Mahatoky sy mino aho hoy izy fa tsy hamela antsika irery ny Sadc Troika, hanampy antsika izy. Matoky aho ary matoky isika fa tsy maintsy atao izay hahatanterahan’izany amin’ity taona ity. Aza malahelo hoy izy ianareo hoe aiza i Dada no tsy niteny. Fantatro hoy izy fa mandeha ny eritreritrareo,tsy ianareo rehetra fa sasantsasany. Fantatro fa eo ny ahiahinareo , ka hoy aho hoe aza manahy ianareo fa tsy hivadi-belirano mihitsy aho.Enga anie ka ho tonga ny fotoana ka hihaona tsy ho ela isika, amin’izay dia afaka milaza bebe kokoa aminareo rehefa tafaverina any. Manantitrantitra ny fiarahabana tratry ny taona vaovao, ary maniry soa. Manana fanantenana sy finoana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 2 janvier 2013 2 janvier 2013 Catégories Politique
22 pensées sur “Filoha RAVALOMANANA MARC : TSY HIVADI-BELIRANO AMIN’NY VAHOAKA MIHITSY AHO”
Miarahaba anao Atoa Filoha, ary misaotra betsaka amin’ny teny fampaherezana nataonao!
Mino sy manantena tokoa izahay Tompoko, ka na dia ela aza andrinay foana!…. Tsy hivadika izahay!… Olona toy ireo ao amin’ny FATn’alika ireo ve no itokisana?… Aleonay tsy hifidy na iza na iza no hilatsaka eo ka mbola tao anatin’ny mpanongam-panjakana, …. indrindra ireo mody misitaka, ka manaratsy ny Fitondrana izay notompoiny!
Tsy hivadi-belirano amin’ny vahoaka. Midika izany fa hilatsaka ianao. Ataovy aloha izay hodiana.
HATAO IAHANY NY HINO ,FA EFA EFA TAONA IZAO ANDRIAMATOA FILOHA .
ary ilay kely dia maka tsitapabolana tsitapabolana,dia lasa aman taonany .. ,dia ny Sadec koa sy ny hafa koa dia manaraka ny onjany fotsiny .
Tsia tsy hazo ekena intsony izany ,
Mial mandray andraikitra ny tsirairay .
Fali tokoa mandre Anao ,manome toky sy fanantenana fa hiaraka amin’ny Vahoaka Malagasy Ianao hamerina indry ny hazan’ny Malasy sy ny Firenena…
Tena mazava ny teny nentinao ho Anay amin’izao taona vaovao izao..
Misaotra Anao ami’ny arahaba nataonao ary indrindra amin’ny famerenanao Aminay fa « Izahay tokinao ary Ianao tokinay! »Ary koa ny fanamfisanao fa tsy hivadi-belirano Aminay Ianao !
Tena mazava izany teninao izany ary hanome hery ny Rehetra , fa indrindra ireo tsy naharay tsara ny dikan’ny resaka nataonao tamin’ny mpanao gazety tany Daresalam
izay tsipiko fa tsy noteneninao mivantana tamin’ny Malagasy..!
Eny Fifaliana ,Fanantenana ary Toky ny Fiahana hanambotra ny Firenena Isika no fanomezana lehibe ho anay avy Ainao Andriamatoa Filoha hajaina sy toavina !
Ary Andriamanitra izay mahefa no hitanatana Antsika Malagasy lalandava !.
3 janvier 2013 à 3 h 03 min
Andriamatoa FIKOAN’NY FIRENENA , dia nety mihintsy ny nameronana ary nan
3 janvier 2013 à 3 h 44 min
Andriamatoa FILOHAN ‘ NY FIRENENA dia misaotra Anao amin’ny resaka nataona taminay satria dia namafisinao ny hery tsy hai-tohaina minkina amin’ :
–ny fahatokisana ny SADC sy ny TROIKA
__ny finoana sy ny fahatokina Anao
eo amn’ny fananterahana amin’ny fomba rehetra ny fametrahana ny Firenana eo ny toerana sahaza ny hajany , ary hahafahana manala ny Malagasy amin’ny fahoriana sy ny fahasahiranana mangirifiry izaoe .
Maro ireo Malagasy na tsy tena mahafantatra ,na mody adala mba afahany manaratsy ny SADC / TROIKA ,ary eo ireo mahafantatra fa saingy matimaty…..
Misy aza milaza fa mpanohana Anao enfa nitaky ny fanafohanana ny « accords de Maputo » : santionan’ireo mpandainga, miabataba eto amn’ ny saera fa manohana Anao , nefa miezaka mba tsy hisain’ny fifanarahana
Ny fanazavana mampandresy lahatra ny Malagasy Rehetra dia andraikitry
ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC no manao ezaka isa-paritra , isaky ny disitrika , eny aùin’ny fokontany
Tena zava-dehibe io fampahatsiavina nataonao io…
Miarahaba anao sy ny ankohonanao izahay tratry ny taona vaovao. Misaotra an’Andriamanitra lehibe izahay fa mbola manome anay anao Izy anavotra ity firenena malalantsika ity. Raha mangiana izahay dia midika izany fa tsy te hanakorontana anao amin’ny asa mafy rehetra atrehanao any ho fanavotana ity firenena ity sy ny vahoaka malagasy izay tena mijaly tokoa amin’ny lafin’ny rehetra. Izay no mahatonga anay raha mba manoratra eto mamerina an’ilay hira hoe » tsy resy tsy akory ny olo mangiana satria ny miteny toa afon-jozoro mahery vaika vetivety dia gina, fa ny afon’apombo mateza vaodoro ». Andriamanitra tsy andry ny hafa anie itantana ny dianao amin’ny adidy mavesatra apetraka eo an-tsorokao.
3 janvier 2013 à 9 h 03 min
Miarahaba antsika rehetra mpisera eto tratry ny taona vaovao. Andriamanitra mahery anie hitantana ny diantsika amin’ity taona ity amin’ny adidy rehetra miandry antsika ho fanavotana an’ity firenena ity.Isika tsy kivy mihitsy fa mahatoky an’i Dada hatrany araka ilay tonon-kira hoe « izaho tsy kivy e …JM « .
Tratry ny Taona daholo e! Taonan’ny FANANTENANA !
Ary nankaiza ny Gazety MIDI- MADAGASIKARA ?
Voasambotra sy voageja koa fa tsy zakan’ny MPANONGANA TSY MATAHO-TODY ?!
Miarahaba anao andriamatoa filoha mino izahay fa ho avy tsy ho ela ianao nefa tsy ho avy ka ho raisim-potsiny eny Ivato satria ireo mpanogsam-mpanjakana dia tsy hioalaona @ izany hoe Andriamanitra miaro anao izany. Mino anefa aho, satria izay ihany no azoko atao, izay midika ny tsy fahafahako mihetsika, fa hitandrina izany rehetra izany ianao ka tsara aro @ lafiny rehetra @ fahatongavanao.
Raha ny marina dia tsy mahatoky mihitsy io fifidianana @ volana may io mihitsy aho raha tsy misy anao, ary koa misy ireo fanaraha-maso hentitra… ka dia mbola tsy mahita ny faran’ny krizy aloha aho @ ity taona ity.
Manatena anefa aho fa ianao Andriamatoa filoha afaka manova ny tantara malagasy miaraka amin’ny vahoaka ka miandrandra anao fatratra izahay.
4 janvier 2013 à 9 h 09 min
miarahaba anao Atoa filoha,mirary soa ho anao sy ny fianakavianao
« EFA TENA METY NY ATAONAO FA NY ANAY VAHOAKA NO TSY AMPY E »mila miezaka izahay….
4 janvier 2013 à 14 h 35 min
ts ampy vola avy any @nw Ramosea , ty taonty anie d mbola amitahanw ndray ny mpombanw sy ny mpanaradia anw ary fahano lainga fona alu fa ts ho hita eo ian v ???? ko rats we ronono antavy iz ty ku !!! sa hamboly katsaka ndray é!!!!
Toa ny amalona ao anaty vovo rajoelin!Na malama toa inona aza rajoelina, na toa inona hafetsifetsen’ireo mpanome hevira taingitaingina ,toro vohina , dia sary fotaka sisa no fahitana an-rajoelina tsy mahatohatra ny zava-misy nateraky ny kaitrartrany sy fahamainan’ny lohany..
Nihevtra ary mbola mihevitra rajoelina fa vntana be fotsiny ny Malagasy ka tsy mahatsiaro ny fangifiriana sy ny hanohanana , ka dia hampisehon’ny mahajiolahiboto..
Any ka manaonao foana , mampifangaro ny fanajana , nyfinoana an ANDRIAMANITRA sy y fanaovany asa mifanohitra amin’ny Fitiavan ‘ADRIAMANITRA mandratra manitsaka manambany nmampahantra ny Olombelona Malasy ,izay ao anatin’ny Fianakiamben’ireo zava-boary tian’ANDRIAMANITRA !Kqa hoy i JEHOVAH :
« »Aza manoninonina ny Anarako amin’ny tsiny antony »
ao amin’ny Didy Folo (Exodosy ).
Very fanahy mbola velona , tapi-dalàn-kaleha toa ny sokona nanani-bato , ary tsy mahita intsony atao , tsy olona manoro i rajoelina ka mipenipenina !
Anao inona an’Israël ? hitady fanampiana sa toro-hevitra ,sao mba hijery ireo mpanao vola sandoka mba hahazoana » vola be » entina miatrika ny fifidianana indrindra ny fanomanana azy ! Vola ho hafafy ,izay hahafaly ny Vahoaka ,saingy vola tsy misy vidiny satria vola sandoka !
Sa kosa nitady mpamono olona nozarina hitifitra olona iray ao anatin’ny maro (ohatra ny eny Ivato dia ho impoka amin’ny andro hodiana ny Filha RAVALOMANANA MARC ?)
Israely ,tany manana ny toerany sy ny tantarany indrindra eo amin’ny Fivavahana jiosy sy kristianina ary ny silamo (les réligions révélées , ou les réligions du livre ou les réligions abrahamiques dont ABRAHAM est Chef de la lignée )!
« Fa tsy ataon’i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonotonina ny Anarany ! » Mdika toa izao izany : mampifangaro ny Anarako amin’ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapoko sy ny fitiavako indrindra raha asa ,fomba , hetsika ,fanao ratsy mikasika mivantana ny Olonko ,izay Zava-boariko tiakpo indrindra !
Inona no azon’ny Fitondranan’Israely ho an-drajoelina eo amin’ny ady ifanatrehany amin’ny SADC ? Eo amin’ny sakana tsy hamelana hiverina Antanindrazana ny Filohan’ny Firenena ?
Israel min’ny maha Firenena tsy hanampy an-drajoelin amin’izany
Fa ao amin’ny Mponina dia misy sociétés manofa « cgmmandos » hafaka manantateraka izay tianao hampanvina azy..
amin’ny maha » usqu’au boutiste an-drajoelina dia ao anatin’ny programan’izany !
Mpikambana ao amin’ny Firenena Mikambana Israely ary o anatin’ny Communauté Internationale nanameloka ny mpanongam-panjakana teto Madagasikara tamin’ny 17 mars 2009 !
Israely sy ny USA dia toa ny vary sy rano : tsy mifanary ireo na inona na inona ny seho sy tranga..I NEW YORK no tanana jiosy lehibe indrindra eto An-Tany ( 14 tapitrisa eo ny isan’nyJiosy miasa sy miaina ao )..koa raha mihevitra i rajoelina fa hibetroka ny SADC i Israely dia mitondra sy mampiseho ny fahakelezan’ny sain-drajoelina izay fantatr’izao Tontolo izany !
Amln’ny Malagasy irajoeina no te hiseseho sy hihambo fa tena mitady ny soa ho an’ny Malagasy amin’izao fitsidihany an’ iSRAELY izao..!
Tsy dondrona na tsy vory saina ny Malagasy..,fantatry ny Malagasy fa mangataka afo amin’ny matoatoa rajoelina ankehitriny , mba handretany ny afon’ny sekoseko lasa lavenona mangatsiaka..!
Hono hyoy aho : « rahoviana no hamangy ny vatican rajoelina sy omar ?
ip » crise de foI » tampoka nahazo an-drajoelina dia tokony nanosika azy ho any vatican ..
Raha toa izy roalahy ireo sy nifampi,tana ho any dia tsy nenken’i benoit ny mandray olona tsy manaza ny zon’olombelona indrindra ireo kristianina tsy katolika (ny filohan’ny firenena RAVALOMANANA MARC sady Filoha Mopanampy amin’ny Fitondrana ny FJKM , ny Filohan’ny FJKM ,izay nolakamon’ny miaramila eo ambanin’ny mason’ i omar izay nitsoka sy nisorona ny afon’ny fanonganam-panjakana nanomboka tamin’ny 26 janvier 2009 ! ita sy tadidinny vatican ireny asa jiolahy ireny.
Ny mpanompo sampy sy ny mpanao sikidy izao angamba efa miomana mafy hanasina an’ikelimalaza ,sy fasana eny Andranoro , eny alasora sy eny ambohimanka hiaraka hanatitra rhum sy tantely ho an’ireo razana ivavahany !
Io anie ka tsy fantatra na fitondran’ny razana na vitana na kisendrsendr e !
7 janvier 2013 à 8 h 00 min
Miarahaba anao Andriamatoa Filoha tratry ny taona vaovao 2013. Hamafiso hatrany ny finoana fa tsimaintsy manarina an’i Madagsikara isika, Tsapa mantsy fa ny raha ny vitan’ity fitondrana ity dia tsy mahaonitra ireo noravany akory! Mirarisoa indrindra e!
Miverena amin’izay fa miandry anao ny vahoaka.
Miarahaba anao andriamatoa kisoa nahatratry ny taom pitondran’ny filoha Rajoelina indray, ho ela fanapahana ny chocolaterie any afrique du sud anie enao,dia mirary anao sy ny vady aman-janakao mba hipetraka tsara satria ho tezitra aminareo izahay ato amin’ny magro ny farany amin’ny fita bitro lava ataonareo anay: veloma mandrakizay, hoy titine leo ronono an tavy
Resa-bitro : TITINE, DEUX QUI LA TIENNENT ET UN QUI LAPINE !!
nen’ny samoela wa io !!! VERY AN INÉ VERY AN INE VERY AN INÉ !!!! mbola vo 4 zay reseo alu ne ny ratsiraké !! aiz iz zan papaaa
I kala (na le) TITINE iany no hanongana an’i Domelin-doza rehefa tsy mahazo sôsy indroa na intelo andro.
Jereonareo tsara ange e ! Heritaona sisa no homeko azy dia vita ny tantaran’i Joelimaimbosofina.
8 janvier 2013 à 5 h 08 min
Dénise = titine (lapine mi-tétine first à Lill==>YSSSS)
aïe pfff me fait penser à zistoira tokanono & stuff … originale invention moinsquerien FilsDePute
houra houra youpi !! mbola nahazo erintaona iany !!!! wouaouhhh Msotre
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : NITSIDIM-PASANA RAJOELINA
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA